Nzira yekuchengetedza mari pamari yemari? | Ehupfumi Zvemari
Imwe yezvikanganiso zvakakura kana uchitsvaga Investment funds ndiwo makomisheni ayo vadzvanyiriri vanofanira kusangana nawo. Hazvishamise kuti kirasi iyi yezvigadzirwa zvemari haina komisheni imwechete sekutenga nekutengesa masheya pamusika wemasheya. Asi pane zvinopesana, akasiyana makomisheni uye eakasiyana maitiro anogona kuiswa. Zvese izvi zvinoenderana nemari yekudyara yakasarudzwa uye pamusoro pezvose maneja anoona nezve kushambadzira chigadzirwa. Kusvika padanho rekuti mukuzara kwavo vanogona kusvika 2% pamari yakaiswa mari.
Kwete mune ese mutual mari iwo makomisheni akafanana anobhadhariswa. Kwete zvishoma. Musiyano uripakati peiyo mari yenyika yekudyara uye imwe yepasi rose hunhu hunogona kusanganisira mutsauko pakubhadhara kweinopfuura 1%. Neichi chikonzero chaicho zvakakosha kuti usarudze mamodheru ayo asinganyanyo kuomesa mune izvi. Nekuti nekuwedzera, nei uchibhadhara zvakanyanya mumakomisheni echikwama kana chimwe chehumwe hunhu chichifunga mitengo yakachipa yemhuri?
Kuburikidza nemazano mashoma akareruka kubva zvino zvichienda mberi iwe unozokwanisa kuita mari mune ichi chigadzirwa chekudyara mune imwe nzira ine hungwaru uye iine izvo zvinodiwa maererano nekubhadharwa kwemakomisheni ayo. Nekuti iwe unofanirwa kuziva kuti iwo makomisheni anoiswa kune ese mari, kwete chete mune yakatarwa mari, asi zvakare mune izvo zvinoenderana nemari inoshanduka, mari, mamwe manejimendi kana zvemukati zvakasanganiswa. Mupfungwa iyi, hapana kuregererwa kana iwe uchida kuisa mari yako mune chero yemari yekudyara.
1 Sevha mune mutual mari
2 Dzivisa makomisheni akawedzera
3 Vanodzikiswa kubva mukotesheni
4 Maitiro ekuve nemari
5 Dzivisa kuchinjana kwemari
6 Kusiyanisa mari
Sevha mune mutual mari
Zvichava zvakakosha kuti iwe utange waziva kuti kune akawanda marudzi emakomisheni mune urwu rudzi rwezvigadzirwa zvemari uye zvirokwazvo akawanda kupfuura iwe zvaunofunga pakutanga. Kune mamwe anosungirwa mune ese mari yekudyara, senge avo ve manejimendi uye dhipoziti sangano rinodzikiswa zuva nezuva kubva muhomwe yemari yemari. Saka kuti iwe usatombo cherekedza iyi mari mune yekudyara, kunyangwe muchokwadi vari kuitora zvishoma nezvishoma. Mune izvi, zano hombe rekuchengetedza imwe mari mukuita ndeyekuenda kune iwo mamodheru ane mitengo yakaderera. Mupfungwa iyi, kune mari ine chete 0,6% komisheni uye iyo inogona kuve inobatsira zvakakwana.
Nekuti chinhu chimwe chaunofanirwa kuve uchijekesa kubva zvino zvichienda ndechekuti nekuti iwe unobhadhara mari yakawanda mumakomisheni hazvireve kuti yako purofiti inofanirwa kunge iri yepamusoro. Izvo hazvina hukama nechero imwe uye kune iyo poindi ndeyekuti mari yekudyara nemakomisheni akaderera kazhinji anonyanya kubatsira panguva ino. Sarudzo yako inofanirwa kutarisa kune ramangwana purofiti iyo ichi chigadzirwa chemari chaunogona kukupa. Haizove iri mari yakawanda yaunochengetedza pamwe nekushandisa kweiri zano, asi zvirinani zvinokubatsira iwe kuti uwane mari yakawanda mune yega yebasa rinoitwa mumisika yemari.
Dzivisa makomisheni akawedzera
Mune mari yekudyara, makomisheni haana kugadziriswa, asi zvinopesana, iwo anosiyana. Izvi mukuita zvinongoreva kuti havazombokwanisa kudarika mashoma intermediation margins nemakambani manejimendi anogadzira ichi chigadzirwa chemari. Nekudaro, ivo vane rusununguko ruzere rwekushandisa uye nekuvaverengera, nemakomisheni akawanda sezvavanofunga zvakakodzera. Mutemo wechigunwe une mari mumhando iyi yemari ndeyekudzivirira mwero wakakura kwazvo. Mune akawanda emakesi iwo mutoro wakakosha kwazvo kuitira kuti iwe ugone kuita iyo kuchengetedza kunobatsira zvinobudirira sezvo ivo vachidya yakakura kwazvo chikamu chavo.
Izvi zvinokanganisa zvinodaidzwa kunodaidzwa kunzi makomisheni: uye ndedzipi idzi chaizvo? Zvakanaka, isu tiri kutaura kumakomisheni e kunyorera, kudzorera kana kugovera. Iwe une mukana wakakura wekuti havana kujairika mune mari yekudyara, asi kunyangwe zvakadaro ivo vanogona kumiririra inopfuura 1,50% yemari yebasa. Kunyanya kana ivo vachikubhadharisa kanopfuura kamwe komisheni yeaya maitiro. Hazvishamise kuti inogona kuve nhambo inokwenenzverwa pachikamu chako kana uchizoisa mari yakawanda mune ichi chigadzirwa chemari. Asi zvirokwazvo kwete yezviyero zvine mwero kwazvo iwe paunogona kudzora kukwikwidza kweiyo mari homwe.
Vanodzikiswa kubva mukotesheni
Chero zvazvingaitika, imwe mari yekudyara inobvisa aya makomisheni. yemari yakapihwa kana yakaunganidzwa mibairo, zvinoenderana nemodeli iwe yaunosarudza nguva dzese. Mupfungwa iyi, zvakakosha kuti iwe usarudze mari yekudyara iyo isina zvinopfuura makomisheni ekuhaya kwavo. Nekuti izvo zvinonyanya kukosha ndezvekuti zvinobatsira kwemakore mashoma anotevera uye hazvingavimbe newe kubhadhara zvakanyanya makomisheni. Ichi chinhu chinotongwa nezvimwe zvinhu zvakaoma uye nekushanda kwemisika yemari. Izvo zviri nyore uye uchafanirwa kuzvifunga kubva zvino zvichienda mberi kuchengetedza mari yakawanda kupfuura yaunofunga pakutanga.
Kune rimwe divi, zvinonyanya kubatsira iwe kubhadhara makomisheni akakwira mumari yekudyara kana zviitiko zvako zvichizoenda yepakati nepakati. Kunyanya, nekuti iwe zvishoma nezvishoma unodzora izvi mari. Kupesana nekuita-kwenguva pfupi mashandiro uko mashandisiro awo achanyatso kuoneka. Pane kupesana, epakati uye kunyanya kwenguva refu investa ndiyo yakanyanya kukodzera kuumba bhegi rekuchengetedza panguva yekurega basa. Izvi zvinoreva mukudzidzira kuti iwe unogona kutakura mutengo wemakomisheni.
Maitiro ekuve nemari
Ehezve, chimwe chezvinangwa zvako zvikuru chinofanirwa kuve chakanangana nekuchengetedza mari mumari yekudyara. Uye ndeipi nzira iri nani pane kubhadhara mari shoma kumakomisheni anoshandiswa mune aya mafomati ekuchengetedza. Hapana mubvunzo kuti kusarudza nyika mari yekudyara ichave inodhura zvakanyanya kupfuura epasirese. Chii chimwe, vanogona kunge vakaenzana kana kutonyanya kubatsira uye nemari shoma. Iwe unogona kusarudza iyi modhi mune midziyo yemubhadharo wemakomisheni. Izvo hazvisanganise chero kuyedza uye iwe uchawana inonakidza kwazvo mari yekuita yako wega capital ibatsirike.
Imwe fomula yekusvika panguva imwechete iyi ndeyekusarudza mari inoitwa nemaneja webhangi kwawakatenga mari yako yekudyara. Mazhinji emabhangi ane sevhisi iyi: Bankinter, Santander, BBVA, Sabadell, nezvimwe. Iine kumiririrwa kwakakura kweizvi zvigadzirwa zvemari uye nehunhu hwavo hwese, kubva pamari yemari yakatarwa kuenda kusiyane, kuburikidza neimwe nzira kana kunyangwe manejimendi manejimendi. Ichi chirevo chinofungidzira iwe kuti unyore mari yekudyara nemakomisheni akadzika kwazvo mumusika. Uye nekusiyana kushoma maererano nerubatsiro urwo mamwe mamodheru akagadzirwa nemamwe makambani manejimendi anogona kukupa iwe.
Dzivisa kuchinjana kwemari
Imwe kiyi yekuchengetedza mari mune aya mashandiro iri mune yekuti unodzivirira shanduko yemari kana uchihaya yako mari yekudyara. Ehezve, kunze kwekunge zvanyatsodikanwa kuti ubudirire pabasa rako mumisika yemari. Mupfungwa iyi, haugone kukanganwa kuti uchave nazvo imwezve mari yekuwedzera kubva pamari yekutsinhana. Kune rimwe divi, pachinyakare kirasi iyi yemari yekudyara yakanyanya kuwanda mukushandisa kwemakomisheni avo. Kusvika padanho rekuti iwe unogona kuve nemari isingakoshi uye iyo yaunogona kudzivirira kuburikidza nekungochinja yako zano.
Uye zvakare, kuisa mari mune ino mari yekudyara iwe unofanirwa kuve ne kuenderera mberi nekudzidza mukushanda kwavo uye nenjodzi yakanyanya mavari. Mupfungwa iyi, unogona kurasikirwa nemari yakawanda kana iwe ukakanganisa zvakakomba kana ukasasarudza chaiyo mari yekudyara mari nguva dzese. Nekudaro, iko kuita kwakajairika pakati pevazhinji vashoma nevapakati varimari uye nekudaro kana zvichibvira unofanirwa kudzikamisa urwu rudzi rwekufamba nemari yako. Pakati pezvimwe zvikonzero nekuti iwe unogona kubhadhara zvakanyanya kwazvo kubva zvino zvichienda mberi.
Kune rimwe divi, imwe sosi yekuchengetedza mumakomisheni iri kuburikidza neyekudyara portfolio iyo yakasiyanasiyana. Saka nenzira iyi, vanogona chinja kuzviitiko zvese izvo zvinogona kuoneka mumisika yezvemari, kunyangwe zvakashata kupfuura zvese. Iko kusanganiswa kwakanaka kwe equity uye yakamisirwa mari yemari inogona kuve mhinduro kumatambudziko ako, nemakomisheni akagadziridzwa zvakakwana kune zvinotarisirwa zvaunofanirwa kuita kuti mari yako ibatsire.
Kunyangwe iwe uchifanira kubhadhara zvishoma zvishoma kumakomisheni akapihwa nemaneja. Zano rinoshanda kwazvo ndere kuenda kune avo vari mune yakaderera mhando yemari. Unogona kuvaenzanisa navo kuti vasvike kumari inokodzera mikana yako yemari. Hazvishamise kuti iwe une mukana wekuti kune chakakura chinopihwa mukirasi ino yezvigadzirwa zvemari.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Nzira yekuchengetedza mari pamari yemari?
Dzosera ma invoice asina kubhadharwa kuburikidza neinishuwarenzi yechikwereti